Qalabka SEO - Dib u eegista SEOmoz Pro Toolset
Khamiis, Janaayo 13, 2011 Jimce, Maarso 1, 2013 Douglas Karr
Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO) ayaa gabi ahaanba muhiim u ah istiraatiijiyad kasta oo koritaanka internetka ah. Waa run in bulsheedku ay tahay wax soo ifbaxaya, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in ku dhowaad 90% dadka isticmaala internetka ay sameyn doonaan ugu yaraan hal baaris gudahood kulan khadka tooska ah ah. Ku dar in xaqiiqda ah in isticmaalaha raadinta firfircoon uu leeyahay ujeedo ah inuu sameeyo go'aan wax iibsi inta badan… waxaadna si dhakhso leh u bilaabeysaa inaad aqoonsato sababta ganacsiyada oo dhami ay u leeyihiin istiraatiijiyad dhammaystiran oo khadka tooska ah ah oo ay ku jiraan hagaajinta mashiinka raadinta.
Haddii aadan waqti siinin weli inaad dib u eegto Qalabka SEOmoz Pro, Waxaan kaa codsanayaa inaad. Waxyaabaha la yaabka leh ayaa ah inaadan u baahnayn inaad noqoto Pro si aad u isticmaasho - waa wax iska soo horjeedda. Qalabku wuxuu qaadan karaa qof kasta oo daneynaya hagaajinta darajadooda makiinadaha raadinta wuxuuna siiyaa qalab dhameystiran oo lagama maarmaan u ah hagaajinta goobahooda kana sare maro tartanka. Waxaan u soo bandhignay xirmooyin mid kasta oo ka mid ah macaamiisheenna.
Dadweynihii wanaagsanaa ee SEOmoz ayaa sidoo kale noo oggolaaday inaan siino akoon kujira dabaaldegdeena boostada ee 2,500th - oo uu ku guuleystay Mack Earnhardt oo ka tirsan Agile Reasoning. (Waxaa jira tan abaalmarino ah wali - hubso inaad u-qorto warside adoo gujinaya cinwaanka cinwaanka cinwaanka).
Mahadsanid ahaan, waxaan rabay inaan qoro dib u eegis qoto dheer oo kahadasha saddexda astaamood ee ugu awooda badan SEOmoz Pro Toolset:
Cilad-guurista toddobaadlaha ah iyo raadinta darajada: Softiweerku wuxuu guurguuraa bogga toddobaad kasta wuxuuna ogeysiiyaa isticmaalaha arrimaha saamaynta ku yeelan kara waxqabadka darajada. Erayada furaha ah ayaa loola socdaa qiimeynta Google, Bing, iyo Yahoo oo ka dhan ah tartamayaasha.
Falanqaynta isku xirka tartanka: Faham waxa websaydhadu ku xidhayaan kuwa kula tartamaya, adoo ka caawinaya inay si fiican u darajo saaraan Bartilmaameedsadaan barahan si loo qoro loona hagaajiyo waxqabadkaaga.
Ku-habboonaynta Bogga: Muuqaal kooban oo ka mid ah sida ereyada muhiimka ah ee bogga isticmaalaha u sameynayaan. Fasalada fudud iyo falanqaynta bogga oo faahfaahsan ayaa gacan ka geysanaya bartilmaameedka meelaha ugu waaweyn ee hagaajinta waxayna bixiyaan talooyin faahfaahsan oo ku saabsan sida loo hagaajiyo ku habboonaanta bogga.
Haddii aad bartilmaameed u tahay dhagaystayaasha waxay ku sugan yihiin Mareykanka oo waxaad raadineysaa inaad kormeerto, falanqeyso oo aad horumariso natiijooyinka mashiinka raadinta, SEOmoz Pro waa qalab loo baahan yahay.
Tags: seomozqalabka seomoz
ABC-yada Joogitaanka Internetka
Haye Douglas Waxaan dhawaan qaatay SEOmoz tijaabintooda bilaashka ah ee 1month 🙂… Waxaan kaliya raadinayay hareeraha dib u eegista qaar waxaanan helay qoraalkan, waa qoris wanaagsan! Ma aanan helin waqtigii aan ku isticmaali lahaa koontadayda laakiin waxaan sameyn doonaa sida ugu dhakhsaha badan sida aan doonayo inaan ku ogaado bal inaan qoro waqti buuxa! Waxaad sheegaysaa dhagaystayaasha bartilmaameedka Mareykanka, waxaan joogaa Boqortooyada Midowday oo waxaan bartilmaameedsanayaa inta badan Boqortooyada Midowday iyo macaamiisha qaarkood Yurub sidoo kale - tani faa'iido ma ii tahay?
Hi Chester, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad fiiriso gShiftLabs, waxay kuu oggolaanayaan inaad si caalami ah ula socoto.
Waad ku mahadsantahay talo soo jeedinta waan ka maqanahay inaan hada daawado 🙂
Jun 26, 2011 saacadu markay ahayd 5:48 AM
Nabadeey Douglas, waxaan isticmaaleynay SEOmoz Pro dhowr bilood macaamiisha maxaliga ah ee Filibiin waxeeyna u shaqeysaa si fiican. Ma hubo haddii ay jiraan wax iga maqan. Daryeel si aad u faahfaahin Mahadsanid!
Jun 26, 2011 saacadu markay ahayd 6:24 AM
Taasi waa wax weyn in la maqlo! Markii aan isku dayay inaan tijaabiyo natiijooyinka Yurub qaar ka dib markaa, ma aanan helin macluumaad badan. Waxaan siin doonaa duufaan kale!
Aug 22, 2011 at 3: 36 AM
Waan isku dayi doonaa. Waa bilaash inaad tijaabiso hal bil. Marka, bal aan aragno.
Apr 29, 2012 at 3: 35 PM
mahadsanid, taasi waa dib u eegis xiiso leh
Qalabka SEOmoz dejintu waa mid waajib ku ah dhammaan SEO-yada iyo shakhsiyaadka dhab ka ah qiimeynta mashiinka raadinta oo doonaya inay keenaan boggooda internetka bogga ugu horreeya ee makiinadaha waaweyn ee raadinta sida ugu dhakhsaha badan ee Suurtagal ah.
Waad ku mahadsantahay wadaagida faallooyinkaaga. Xitaa adigu waxay ahayd dib u eegis fudud, weedhan ayaa i heshay: tani maaha faa'iido. Waxaan ka baqay inaan lumiyo waqti badan iyo dadaal. Mahadsanid!
Kaliya neceb kharashka kaarka deynta, waxaan jeclaan lahaa inaan ku bixiyo paypal.